antivirus Fast & ကို Safe Boost ™ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ » antivirus Fast & ကို Safe Boost ™
antivirus Fast & ကို Safe Boost ™ APK ကို
ဗိုင်းရပ်စ်ကနေကို Safe ဖြစ်! သင့် Android ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကို performance ကိုကာကွယ်ပါနှင့်မြှင့်တင်ရန်,
သင်တစ်ဦး Android ဖုန်းရှိသည်နှင့်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကြောင့်နှေးကွေးရဖို့စတင်သည်နှင့်ဘက်ထရီရေနုတ်မြောင်းပိုမြန်လျှင်, သင့်ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းဗိုင်းရပ်စ်ရှိတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တကား! သိပါသလား Download လုပ်ပြီးအင်စတောလုပ်ပါကဤအခမဲ့ antivirus ကို tool ကိုနှင့်ဤပရီမီယံအင်တာနက်လုံခြုံရေးဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ပေးသည်။
antivirus Fast & ကို Safe Boost ™သင်မိုဘိုင်းဒေတာအရှုံးနှင့် Android OS ကိုပစ်မှတ်ထားကြောင်းခြိမ်းခြောက်မှုများဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရာပူဇော်သက္ကာကိုတစ်ကယ့်ကိုမြင့်မားတဲ့ထောက်လှမ်းမှုနှုန်းနှင့်အတူတစ် antivirus ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်တော့မှမပြုမီနဲ့တူ, အွန်လိုင်းဝဘ်နှင့်စျေးဝယ်ပျော်ရွှင်ခံစားပါ! ကျနော်တို့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှု, malware, spyware, သံသယဖြစ်ဖွယ်ဝှက်ထားသောဖိုင်များနှင့် trojans နဲ့ဆန့်ကျင်အကောင်းဆုံးကာကွယ်မှုရှိသည်။
ဒါကလုံခြုံရေး app တစ်ခုကိုလည်းအလွန်ပေါ့ပါးသည်။ ယာဉ်အသွားအလာနှင့်၎င်း၏ဗိုင်းရပ်စ်ဒေတာအခြေစိုက်စခန်းအဆက်မပြတ်ဗိုင်းရပ်စ်များ, worms ဒါမှမဟုတ် Trojan ဟာမြင်းများကဲ့သို့နောက်ဆုံးပေါ် malware ကိုရောဂါကူးစက်မှုများနှင့်မွမ်းမံဝန်မထားဘူး။
စကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်နှင့်ပဲစက္ကန့်အနည်းငယ်ကင်နာနှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏ device ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်ထိပုတ်ပါ, ဘေးကင်းလုံခြုံအားလုံးသင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိက data တွေကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း။
ဒါဟာအံ့သြအခမဲ့ tool ကိုလိမ့်မည်အော်တို scan ကအားလုံးဒေါင်းလုပ်လုပ် applications များနှင့်ဖိုင်များ။ အနားယူ ... ရှာဖွေမှု, ဆိုင်နှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာလူမှုကွန်ယက်ကိုအသုံးပြုပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ antivirus ကို app ကိုအားနည်းချက်များနှင့်အင်တာနက်ခြိမ်းခြောက်မှုများသတိထားကြလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်, ဝဘ် browsing စဉ်ကိုယုံကြည်မှုရှိစေသတည်း
ဗိုင်းရပ်စ် tracker အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏ antivirus ကိုလုပ်ရပ်, သင်ချင်တယ်ဆိုအချိန်ကိုသက်ဝင်သို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲနိုင်မတဦးတည်း On-demand စကင်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ device တိုးမြှင်, အန္တရာယ်ရှိတဲ့အကြောင်းအရာအားဖွင့်ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်း။
အံ့သြ features တွေ:
- ကို malware, spyware နဲ့ trojan မြင်းများဆန့်ကျင်ပြင်းထန်သောဗိုင်းရပ်စ် detection နဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
- အနိမျ့အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှု (နည်းနည်းသယံဇာတနှင့်မှတ်ဉာဏ်ကိုအသုံးပြုသည်)
- မဟာအ user interface ကိုအလွန်အသုံးပြုသူဖော်ရွေ
- installed apps များ, မှတ်ဉာဏ်ကဒ်အသစ်ဆွဲယူတဲ့ဖိုင်တွေစကင်ဖတ်
- System ကိုသန့်စင်ဘက်ပေါင်းစုံ
- Scheduled apps များ၏စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့, ဆက်တင်ဖိုင်တွေ
- app တစ်ခု install လုပ်ပြီးချိန်တွင်စတင်အလိုအလြောကျစကင်ဖတ်
သငျသညျသနျ့ရှငျးပွညျ့အဝမြန်နှုန်းအတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သင့်ရဲ့ Android ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုပါသလား? ကျနော်တို့ကဖြစ်ပျက် Make မယ်!
antivirus ကျွန်တော်အစာရှောင်ခြင်းပါပဲ Fast & ကို Safe Boost ™ကျနော်တို့အလေးအနက်နေနှင့်ကျွန်တော် 100% အခမဲ့င် - သာလျှင် Google မှာ Play!
bugs fixed နဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဒေတာအခြေစိုက်စခန်း updated
antivirus Fast & ကို Safe Boost ™
ကျနော်တို့ဒါဟာ Appen Make